Heshiiska Jabuuti iyo Bixitaanka Ciidanka Itoobiya
Waxaa taariikhdu markay ahayd 26dii Oktober 2008 heshiis dhaqangalin xabbad joojin ah ku kala saxiixday Dowladda Kumeelgaarka (DKMG)ah iyo Isbahaysiga Dib u Xoraynta Soomaaliya(ARS) garanka ku sugan Jabuuti. Aniga oo aamminsan in wadahalku noqon karo waddo kamid ah waddooyinka lagu gaari karo xal u helidda dhibaatada murugsan ee Soomaaliya, haddana waxaa muhiim ah in la falanqeeyo nuxurka heshiisyada la gaarayo iyada oo laga duulayo danta guud iyo nacfiga uu u yeelan karo umadda Soomaaliyeed.
Sida uu xusayo heshiiska la saxiixay, ma ahan mid ugub ah sida ku cad cinwaankiisa ee waxa uu daba socdaa heshiiskiisyadii hore sida kii la saxiixay 19kii Agoosto 2008 oo qeexayey sida ay u shaqaynayaan guddiyada labada dhinac iyo heshiiskii ka horreeyey oo 9kii Juun 2008 oo ay guddiyada hadda shaqeeyaa ku salaysan yihiin. Taas macnaheedu waxa uu yahay in heshiiskii 9kii Juun uu yahay asalka heshiiska la saxiixay iyo sidii loo hirgelin lahaa.
Qoraalkan kooban waxaan diiradda ku saari doonaa qaanuun iyo siyaasad ahaan waxa uu xambaarsan yahay heshiiska la gaaray, anoo u kala qaadaya :
Guuritaanka Ciidanka Itoobiya ee xaafadaha qaar
Qaybta saddexaad ee heshiiska waxaa ay khusaysaa guuritaanka ciidanka Itoobiya ee xaafadaha qaar. Qodobka 6aad ayaa waxa uu dhigayaa in ay ka guurayaan meelo kamid ah magaalada Muqdisho sida Towfiiq, Garoonka Kubadda Cagta ee Muqdisho,Warshadda Baastadaka, Xayle Bariise iyo Xarunta Wasaaradda Gaashaandhiga. Waxaan ognahay in ciidamada Itoobiya ay magaalada ka deggan yihiin meelo kale sida Xeradii Ciidanka asluubta, Dekaddii Hore, Waddada Makka Al-Mukarrama, Xaruntii Madaxtooyada iyo meelo kale. Meelahaas maka guurayaan? Ciiddanka ka guuraya meelaha la cayimay xaggee u guurayaan? Heshiiskaan waxa uu u ogolyahay in ay magaalada Muqdisho ama meeshii kale oo ay rabaan degaan. Waxa kale oo qaybtan lagu xusay in Ciidanka Itoobiya ka baxayaan magaalada Baladweyne. Sida aan la soconno waqtiga heshiiska la saxiixay ciiddan Itoobiyaan ah majoogin magaalada Beladweyne. Waxaa kale oo aan lasoo hadal qaadin magaalada Baydhabo oo ay deggan yihiin Ciidan Itoobiyaan ah. Nin aan saaxiib nahay ayaa igula kaftamay “Beledweyne ma Baydhabaa lagu khalday? Maxaa looga hadli waayey ciidanka jooga Baydhabo maaddaama laga hadlayey ciidan Itoobiyaan ah oo ka guuraya magaalooyinka Soomaaliya? ”
Qodobka 6aad ayaa isna qoraya in “si looga hortago bannaanaasho ammaan meelaha ciidanka Itoobiya ka guurayaan ” in marka ciidamada Itoobiya ka baxaan xarumaha la cayimay lagu baddalo kuwo AMISOM oo ay caawinayaan ciidan ka socda DKMG ah iyo ARS. Qaanuun ahaan waxaa ka dhalanaya qodobkaan in laysla qiray in ciidanka Itoobiya ay arrimo ammaan sugid u joogeen goobaha ay dadka ka bara kiciyeen iyo meelaha kale oo ay hadda deggenaannayaan, annaga oo wada og in taasi xaqiiqda ka fog tahay. Ciidamka Itoobiya waxa ay goobahaas ku soo galeen dagaal ayaga oo ka bara kiciyey shacab kor u dhaafaya malyan oo deggenaa, waxa ayna goobahaas si joogto ah oo arxan darro ah illaa maanta ugu duqeeyaan shacab Soomaaliyeed oo maati u badan.Haddaba in la yiraahdo, ciidankaas ayaa ammaan sugid meeshaas u jooga waxa ay af lagaado ku noqonaysaa malaayiinta qof oo ay ciidamada Itoobiya sida dulmiga ah u waxyeeleeyeen. Tan kale, maaddaama goobaha ay Itoobiyaanka ka baxayaan ay yihiin ama u dhow yihiin deegaan shacab maxaa keenay in la soo dejiyo ciidan kale oo lagu badalo? Ciidanka AMISOM oo lagu beddelayo kuwa Itoobiya goobaha ay ka baxayaan waxa ay halkaas joogayaan inta laga helayo ciidan ka socda Qaramada Midoobay oo aan la ogayn marka ay imaanayaan. Sida aan aragnay maalmihii tagay, ciidanka AMISON waxa ay duqeyn xun u gaysteen goobo ay dad shacab ahi deggan yihiin sida suuqa weyn ee Bakaaraha.Waxaan kale oo ognahay in barakicii u dambeeyey ee Muqdisho ka dhaca ay masuul ka ahaayeen ciidanka AMISOM . Haddaba ,sow arinkani caqabad kuma aha soo laabashada dadkii dulmiga lagu bara kiciyey?
Ka bixitaanka Ciidanka Itoobiya ee dalka Soomaaliya
Qodobka 7aad ayaa waxa uu qorayaa in wajiga labaad oo bixitaanka Soomaaliya la dhamaystiro 120 gudahood eyada oo la tixraacayo heshiiskii 19kii Agoosto oo kan ka horreeyey. Arinka meesha ku jira ayaa ah ka bixitaanka ciiddanka Itoobiya waxa ay ku xiran tahay in la helo ciidan ka socda Qaramada Midoobay oo ku filan sida uu qorayo Qodobka 7aad(b) ee heshiiskii hore oo la saxiixay 9ka Juun 2008.Guddiyada labada kooxood oo shaqaynaya hadda oo isla gaaray heshiiskii 18 August iyo kan maanta waxa ay ku salaysan yihiin oo lagu dhisay qodobka 8aad(c) ee heshiiskii 9kii Juun 2008, waxa ayna qayb ka ahaayeen hirgalintiisa. Sidaas daraadeed, marka la raaco heshiiska , ciidanka Itoobiya waxa ay dalka ka baxayaan marka DKMG ahi codsi u gudbiso ,lana helo ciidan ka socda Qaramada Midoobay oo ku filan. Shuruudaas ku xiran bixitaanka Itoobiya
Samaynta Ciidan isku dhafan
Waa arrin fiican oo aan laga maarmayn in la helo ciidan loo dhan yahay dadkuna ku kalsoonaan karaan oo suga ammaanka. Heshiiska kuma cadda sida loo samaynayo ciidankaas iyo cidda laga qaybgalinayo.Qaybta 4aad oo heshiiska ayaa sheegaysa in la labada kooxood diyaariyaan ciidan 10,000 boolis ah. Waxaa wanaagsan in aan lagu dag dagin in laysku daro ciidanka labada kooxood oo hadda xabadda isla hor fadhiya lana raadiyo qaab loo dhisi lahaa ciidan ilaalin kara amaanka iyo sharafta dadka Soomaaliyeed oo dadku aamini karaan. Arinkaan oo ay horyaallaan caqabado badan waxaan ka warsugaynaa marka labada kooxood soo saaraan faahfaahinta ku aadan qaabka ay u wajahayaan mana wanaagsana in laga hor dhaco.
Dagaalka xaqa ah oo hubaysan oo looga soo horjeedo ciidanka Itoobiya oo dalka Soomaaliyeed sida sharci darada ah ugu soo duulay iyo dadaalada wada hadalada lagu doonayo in hab nabad ah looga saaro dalka waa kuwo is kaabaya haddii si caqli leh loo wajaho danta guud iyo daacadnimana lagu saleeyo. Haddii ujeedada la leeyahay oo ah in dalka Soomaaliya laga saaro ciidanka ku soo duulay lana helo dowlad caddaalad ku salaysan oo dalka si wanaagsan u hoggaamin karta lagu gaarayo wada hadal waa arin mudan in fursad la siiyo lana taageero. Illaa hadda ma cadda marka iyo in ay baxayaan ciidanka Itoobiya, maadaama ay ku xiran tahay shuruud aan la ogeyn marka ama in la helayo. Waxaa muhiin ah in lagu dadaalo in aan la kala qaybin dadka dagaalka kula jira ciidanka Itoobiya.Sida laysku raacsan yahay wada jirkooda iyo dhiigga ay hureen ayaa keentay in maanta meeshaan la soo gaaro iyo in la ogolaado wadahadal intaba. Haddii ay ciidanka Itoobiya ka baxaan dalka Soomaaliya waa arinkii loo dagaallamayey dadaalkana loo bixinayey. Haddii ay bixiwaayaanna waa in dadaallada iskaabaya meeshooda ka sii socdaan iyada oo maanka lagu haynayo in wax isku duubni lagu waayey aan tafaraaruq lagu heleyn.
Ahmed Ali M.Khayre
Heshiiskii Jabuuti ee JOktoobar 26, 2008 Halkan ka akhri...